Sahy Niaro ny Vahoakan’Andriamanitra i Estera | Tena Finoana
Sahy Niaro ny Vahoakan’Andriamanitra Izy
1-3. a) Nahoana i Estera no natahotra ho any amin’ny vadiny? b) Inona avy ny fanontaniana hodinihintsika?
HIDITRA ao an-tokotanin’ny lapa ao Sosana i Estera. Tena natao miavaka be mihitsy ilay lapa. Feno sary sokitra maro loko ny rindrin’ilay izy sady nohosorana verinia. Ao ny sarina ombilahy manan’elatra sy liona, ao koa ny sarina mpandefa zana-tsipìka. Misy andry vato sy sarivongana ngezabe koa ao. Avo toerana ilay lapa, sady akaikin’ny Tendrombohitra Zagros, ka tazana tsara avy eo ny Reniranon’i Choaspès. Vao mahita an’izany rehetra izany ny vahiny, dia fantany avy hatrany hoe manam-pahefana be ilay mpanjaka ao. Ary marina izany satria izy aza niantso ny tenany hoe “mpanjaka lehibe.” Izy mihitsy no hotadiavin’i Estera. Natahotra be i Estera nefa niezaka ho tony ihany. Ny mahagaga anefa dia izao: Vadiny io mpanjaka io.
2 Ahasoerosy no anarany. * Tsy lehilahy hoatr’azy mihitsy angamba no noeritreretin’i Estera ho vadiny. Jiosy mantsy i Estera, sady tena tia an’i Jehovah. I Ahasoerosy anefa tsy mpanompon’i Jehovah. Tsy mba toa an’i Abrahama, ohatra, izy. Nanetry tena mantsy i Abrahama, ka nankatò an’i Jehovah rehefa niteny izy hoe: ‘Henoy ny tenin’i Saraha [vadinao].’ (Gen. 21:12) I Ahasoerosy kosa zara raha nahalala, na tsy nahalala mihitsy, an’i Jehovah sy ny Lalàny. Lalàna persianina no fantany, anisan’izany ilay hoe izay mankeo anatrehan’ny mpanjaka nefa tsy nantsoiny akory dia hovonoina ho faty. Izany mihitsy anefa no hataon’i Estera izao. Tsy nantsoin’ny mpanjaka akory izy, nefa ho any ihany. Iny izy fa nankeo amin’ny tokotany anatiny, mba ho hitan’ny mpanjaka avy teo amin’ny seza fiandrianany. Hoatran’ny hoe hitono tena ho faty izy.—Vakio ny Estera 4:11; 5:1.
3 Fa nahoana io vehivavy tena nanam-pinoana io no nanao an’izany? Inona no ianarantsika avy aminy? Andeha aloha hojerentsika ny nahatonga azy ho lasa vadin’ny mpanjakan’i Persa.
Iza moa i Estera?
4. Nahoana i Estera no lasa notezain’i Mordekay?
4 Kamboty izy, ary tsy dia fantatra ny momba ny ray aman-dreniny. Nataon’izy ireo hoe Hadasa ny anarany. Teny hebreo izy io, ary midika hoe “mirta”, anarana hazo madinika mamony fotsifotsy tsara tarehy. Rehefa maty ny ray aman-dreniny, dia nisy havany iray atao hoe Mordekay niantra azy ka nandray azy ho zanany. Zanak’olo-mpirahalahy izy ireo, saingy zokin’i Estera lavitra be i Mordekay.—Est. 2:5-7, 15.
Faly erỳ i Mordekay satria tsara tarehy i Estera nefa hendry
5, 6. a) Inona foana no nampianarin’i Mordekay an’i Estera? b) Nanao ahoana ny fiainan’izy ireo?
5 Anisan’ny Jiosy natao sesitany tao Sosana, renivohitr’i Persa, i Mordekay sy Estera. Azo inoana fa tsy azoazon’ny olona ry zareo noho ny fivavahany sy ny Lalàna narahiny. Nampianarin’i Mordekay momba an’i Jehovah foana anefa i Estera. Nampianariny azy, ohatra, fa mamindra fo i Jehovah ka efa imbetsaka no namonjy ny vahoakany, sady mbola vonona hamonjy azy ireo. (Lev. 26:44, 45) Azo antoka fa vao mainka izany nahatonga azy mianaka hifankatia sy tsy hifankafoy mihitsy.
6 Niasa tao amin’ny lapan’i Sosana angamba i Mordekay, satria nipetraka foana teo am-bavahady niaraka tamin’ny tandapa hafa. (Est. 2:19, 21; 3:3) Tsy tena fantatsika kosa hoe inona no nataon’i Estera tamin’izy mbola ankizivavy. Azo inoana fa nazoto nanao raharaha sy nikarakara tsara an’i Mordekay izy. Angamba tany amin’ny faritra mahantrahantra ry zareo no nipetraka, izany hoe teny ampitan’ny renirano eo akaikin’ilay lapa. Tian’i Estera erỳ angamba ny nijerijery entana teny an-tsena, anisan’izany ny firavaka volamena sy volafotsy. Tsy tao an-tsainy mihitsy anefa hoe hanana be dia be amin’ireny izy indray andro any. Tsy fantany mantsy fa hiova be ny fiainany.
7. Nahoana i Vasty no nesorina tsy ho vadin’ny mpanjaka, ary inona no nitranga taorian’izay?
7 Nalaza be tao Sosana, indray andro, hoe nisy olana tao an-tranon’ny mpanjaka. Fa nisy inona? Nanao fety be i Ahasoerosy ka nanasa olona ambony. Tondraka ny sakafo tamin’izay, ary ny divay tsy lazaina intsony. Nanao fety nitokana niaraka tamin’ny vehivavy kosa i Vasty vadiny. Tsara tarehy be izy ka nampanantsoin’i Ahasoerosy mba haseho ny vahiny. Tsy nety anefa izy. Tezitra be ny mpanjaka sady nahatsiaro ho afa-baraka, ka nanontaniany ny mpanolo-tsainy hoe ahoana no hanasaziana an’i Vasty. Nesorina tsy ho vadin’ny mpanjaka àry izy. Nitady virjiny tsara tarehy eran’ilay fanjakana avy eo ny mpanompon’ny mpanjaka, mba hasolo azy.—Est. 1:1–2:4.
8. a) Nahoana i Mordekay no niady saina rehefa nihalehibe i Estera? b) Inona no tokony hotadidintsika, raha jerena ny toro lalan’ny Baiboly? (Jereo koa ny Ohabolana 31:30.)
8 Efa tsikaritr’i Mordekay angamba fa lasa vavy lehibe i Estera sady tsara tarehy be. Mety ho nirehareha kely izy, nefa koa niady saina hoe hanao ahoana i Estera. “Sady tsara bika no tsara tarehy razazavavy”, hoy ny Estera 2:7. Milaza tokoa ny Baiboly fa mahafinaritra ny hoe tsara tarehy. Ampianarina ao koa anefa hoe tsy ampy izany, fa ilaina ny manetry tena sy miezaka ho hendry. Ny olona tsara tarehy mantsy mora lasa jejojejo sy mirehareha ary ratsy toetra. Sa ahoana hoy ianao? (Vakio ny Ohabolana 11:22.) Toy izany koa ve anefa i Estera? Sa kosa izy ho hendry ihany? Aleo arahintsika ny tohin’ny tantara.
9. a) Inona no nitranga rehefa hitan’ny mpanompon’ny mpanjaka i Estera, ary nahoana no mafy tamin’izy sy Mordekay ny nisaraka? b) Nahoana izy no navelan’i Mordekay hanambady mpanompo sampy? (Diniho koa ilay efajoro.)
9 Nahita an’i Estera ny mpanompon’ny mpanjaka, rehefa nitady an’izay zazavavy tsara indrindra. Nentin’izy ireo tany an-dapa àry izy, niaraka tamin’ny tovovavy hafa. (Est. 2:8) Tsy maintsy ho mafy tamin’i Mordekay sy Estera ny nisaraka, satria toy ny mpianaka mihitsy ry zareo. Tsy tian’i Mordekay hanambady olona tsy mpivavaka tamin’i Jehovah ilay zaza notezainy, na dia mpanjaka aza ilay ho vadiny. Tsy afa-nanoatra anefa izy. * Azo antoka fa nohafatrafarany tsara i Estera talohan’ny handeha. Tena nihaino azy i Estera nefa lasa saina ihany teny an-dalana hoe: ‘Hanao ahoana àry ny fiainako?’
Nahazo sitraka tamin’ny olon-drehetra izy
10, 11. a) Nahoana no mety ho nampiova an’i Estera ny fiainana tao an-dapa? b) Ahoana no ahitana fa niady saina momba an’i Estera i Mordekay?
10 Tena vaovao be tamin’i Estera ny fiainana tao an-dapa. Tafaraka taminy tao daholo ireo “tovovavy maro” nangonina eran’ny Fanjakana Persianina. Azo antoka fa samy hafa be ny fombafomban’izy ireo sy ny fiteniny ary ny toe-tsainy. I Hegay tandapa no niandraikitra azy rehetra. Nokarakaraina tsara nandritra ny herintaona ny bika aman’endrik’izy ireo. Nasaina niotra tamin’ny menaka manitra, ohatra, ry zareo. (Est. 2:8, 12) Mety ho nahatonga an’ireo tovovavy tsy hieritreritra afa-tsy ny bika aman’endriny anefa izany, ka ho jejojejo sy ho tia mifaninana. Lasa hoatr’izany koa ve i Estera?
11 Niady saina be momba an’i Estera i Mordekay, ka nandalondalo teny akaikin’ny tranon’ireo tovovavy isan’andro. (Est. 2:11) Azo antoka fa faly erỳ izy isaky ny nahazo vaovao kely, angamba avy tamin’ny mpanompo tsara fanahy tao an-dapa. Fa inona no henony?
12, 13. a) Inona no lazain’ny Estera 2:15 momba an’i Estera? b) Nahoana no faly i Mordekay rehefa tsy niteniteny i Estera hoe Jiosy izy?
12 Tena nahafinaritra an’i Hegay i Estera, ka nokarakarainy tsara. Nomeny mpanompovavy fito izy sady napetrany tao amin’ny efitra tsara indrindra. Tsy vitan’izay fa “nahazo sitraka foana tamin’izay rehetra nahita azy i Estera.” (Est. 2:9, 15) Ny hatsaran-tarehiny ihany ve no nampiaiky ny olon-drehetra? Tsy izany fotsiny.
Fantatr’i Estera fa tsy ampy ny hoe tsara tarehy, fa tena ilaina koa ny manetry tena sy miezaka ho hendry
13 Tena hendry sy nankatò koa izy. Hoy ny Estera 2:10: “Tsy niteniteny momba ny fireneny na ny havany i Estera, satria efa nofeperan’i Mordekay mba tsy hilaza an’izany.” Mety hoe hitan’i Mordekay mantsy fa navakavahan’ny olona ambony tao Persa ny Jiosy. Faly erỳ àry izy nahafantatra fa mbola nanaraka ny teniny foana i Estera, na tsy teo imasony aza.
14. Inona no azon’ny tanora atao mba hanahafana an’i Estera?
14 Afaka manahaka an’i Estera koa ianareo tanora. Ho faly ny ray aman-dreninareo na ny mpitaiza anareo amin’izay. Miezaha ho hendry foana, na dia rehefa tsy misy mahita aza. Aza manaiky ho voatarika hanao ratsy, na dia maditra be sy ratsy toetra ary maivan-doha daholo aza ny olona manodidina anareo. Tena ho faly koa ny fon’ilay Rainareo any an-danitra, raha manao izany ianareo.—Vakio ny Ohabolana 27:11.
15, 16. a) Nahoana i Estera no tian’ny mpanjaka? b) Nahoana no sarotra tamin’i Estera ilay fiainany vaovao?
15 Hiseho amin’ny mpanjaka amin’izay izao i Estera. Afaka nangataka izay nilainy izy, angamba zavatra hahatsara tarehy azy kokoa. Nanetry tena anefa izy ka tsy nangataka na inona na inona, afa-tsy izay nolazain’i Hegay. (Est. 2:15) Takany angamba fa tsy hambabo ny fon’ny mpanjaka raha ny hatsaran-tarehy fotsiny, fa tena ilaina koa ny manetry tena. Izany tokoa ve no izy?
16 Hoy ny Baiboly: “Tian’ny mpanjaka mihoatra noho ireo vehivavy rehetra i Estera, ka nahazo sitraka taminy sy nanehoany hatsaram-panahy mihoatra noho ireo virjiny rehetra. Dia napetrany teo an-dohan’i Estera ny diadema, ary nataony vadin’ny mpanjaka hisolo an’i Vasty izy.” (Est. 2:17) Tsy maintsy hoe sarotra tamin’i Estera ny nanova ny fiainany satria izy efa nanetrinetry tena foana. Ilay mpanjaka nahery indrindra teto an-tany mantsy no lasa vadiny! Nahatonga azy hanambony tena ve izany? Tsy izany mihitsy!
17. a) Mbola nankatò an’i Mordekay ve i Estera? Hazavao. b) Nahoana isika ankehitriny no tena mila manahaka an’i Estera?
17 Nankatò an’i Mordekay foana i Estera, ka mbola tsy niteniteny ihany hoe Jiosy. Nanaiky koa izy rehefa nasain’i Mordekay nilaza hoe misy mitady hamono ny mpanjaka. Soa ihany izy fa nanao an’izany satria tratra ireo olon-dratsy avy eo. (Est. 2:20-23) Nanetry tena sy nankatò foana i Estera, satria nino an’Andriamanitra. Tsy tia mankatò intsony anefa izao ny olona, fa aleon’izy ireo mikomy. Tokony hiezaka hankatò foana kosa isika raha tena manam-pinoana, toa an’i Estera.
Voasedra ny finoan’i Estera
18. a) Nahoana i Mordekay no tsy nety niankohoka teo anatrehan’i Hamana? (Jereo koa ny fanamarihana ambany pejy.) b) Inona koa no ataon’ny olona maro manam-pinoana ankehitriny?
18 Lasa olona ambony tao an-dapa ny lehilahy iray atao hoe Hamana. Notendren’ny mpanjaka ho praiminisitra izy, ka lasa izy no manarakaraka azy eo amin’ny fitondrana sady tanana ankavanany. Nandidy mihitsy aza ny mpanjaka fa tsy maintsy miankohoka eo anatrehan’i Hamana izay mifanena aminy. (Est. 3:1-4) Tsy nety tamin’i Mordekay anefa izany. Agagita mantsy i Hamana, izany hoe taranak’i Agaga, mpanjaka amalekita nasain’i Jehovah novonoin’i Samoela mpaminany. (1 Sam. 15:33) Tena ratsy fanahy ny Amalekita, satria nanohitra an’i Jehovah sy ny Israelita. Nasain’i Jehovah naringana àry izy rehetra. * (Deot. 25:19) Noho izany, dia tsy hiankohoka eo anatrehan’ny Amalekita mihitsy ny Jiosy toa an’i Mordekay. Marina fa te hankatò ny mpanjaka izy, nefa tsy afaka ny hivadika amin’Andriamanitra. Maro koa ankehitriny ny olona manam-pinoana mampihatra an’ilay hoe: “Andriamanitra no mpitondra anay ka izy no tsy maintsy ankatoavinay, fa tsy olona.” (Asa. 5:29) Mankatò an’io foana izy ireo, na dia mety hamoizany ny ainy aza izany.
19. Inona ilay tetik’i Hamana, ary ahoana no nandreseny lahatra ny mpanjaka?
19 Romotra i Hamana ka tiany hovonoina i Mordekay, ary tsy izy ihany fa ny Jiosy rehetra mihitsy! Nanaratsy ny Jiosy tany amin’ny mpanjaka àry izy. Tsy notononiny hoe ny Jiosy ilay vahoaka tiany haripaka, fa nilaza an-kolaka izy hoe olona tsy misy dikany izy ireo, satria “miparitaka any amin’ireo firenena.” Nilaza aza izy fa tsy mankatò ny lalàn’ny mpanjaka ny Jiosy fa mikomy, ka mety hampidi-doza. Vonona hanome vola be ho an’ny fanjakana mihitsy i Hamana mba handripahana azy ireo. * Nomen’i Ahasoerosy azy àry ny peratra fanisiany tombo-kase, mba ho i Hamana mihitsy no hamoaka an’ilay didy.—Est. 3:5-10.
20, 21. a) Inona ny vokatr’ilay didy navoakan’i Hamana? b) Inona no nasain’i Mordekay nataon’i Estera?
20 Nisy iraka nitaingin-tsoavaly nalefa haingana eran’ilay fanjakana, mba hampiely an’ilay didy hamonoana ny Jiosy. Eritrereto ange ny vokany rehefa nandre an’izany ireo Jiosy tany Jerosalema e! Vao avy tany an-tsesitany tany Babylona izy ireo. Vao naorina koa ny tanànany, ka na manda aza mbola tsy nitsangana. Mety ho nahatsiaro azy ireo i Mordekay rehefa nandre an’ilay vaovao ratsy, sady nieritreritra an’ireo namany sy havany tao Sosana. Kivy be izy ka nandrovitra ny akanjony ary nitafy lamba gony. Nohosorany lavenona koa ny lohany, dia nidradradradra teo afovoan-tanàna izy. I Hamana kosa nisotrosotro niaraka tamin’ny mpanjaka. Tsy nampihontsina azy akory ny fahorian’ny hafa vokatry ny nataony.—Vakio ny Estera 3:12–4:1.
21 Henon’i Estera fa nitafy gony i Mordekay ka nandefasany akanjo. Tsy nety nampiononina anefa izy ka tsy nandray an’ilay izy. Fantatr’i Mordekay fa tsy mety ny mijanona amin’izao. Inona anefa no azony atao? Efa nieritreritra be foana angamba izy talohan’io hoe maninona no navelan’i Jehovah hisaraka aminy ilay zaza notezainy, ka lasa vadina mpanjaka mpanompo sampy. Toa mazava anefa izao fa natao hamonjy ny Jiosy i Estera. Nandefa hafatra ho azy àry i Mordekay, ka niangavy azy handresy lahatra ny mpanjaka mba hiaro ny ‘fireneny.’—Est. 4:4-8.
22. Nahoana i Estera no natahotra hankany amin’ny mpanjaka? (Jereo koa ny fanamarihana ambany pejy.)
22 Izany no fitsapana mafy indrindra tamin’i Estera. Nivadi-po mihitsy izy nandre an’ilay hafatra. Notsoriny tamin’i Mordekay fa natahotra izy. Nampahatsiahiviny azy ilay lalàna hoe hovonoina ho faty izay mankany amin’ny mpanjaka nefa tsy nantsoiny akory, raha tsy hoe tondroiny amin’ny tehiny volamena angaha. I Estera ve anefa dia afaka ny hanantena an’izany? I Vasty aza tsy nananan’ny mpanjaka antra rehefa tsy nankatò azy! Efa 30 andro koa ny mpanjaka no tsy niantso an’i Estera. Natahotra àry izy hoe niova hevitra sahady i Ahasoerosy ka tsy tia azy intsony. *—Est. 4:9-11.
23. a) Inona no nolazain’i Mordekay mba hanatanjahana ny finoan’i Estera? b) Nahoana isika no tokony hanahaka an’i Mordekay?
23 Te hanatanjaka ny finoan’i Estera i Mordekay, ka hentitra rehefa namaly azy. Nilaza izy fa hisy fomba hafa foana hamonjen’i Jehovah ny Jiosy, na dia tsy hanampy azy ireo aza i Estera. Nampitandrina anefa i Mordekay hoe tsy afaka manantena ny ho voavonjy i Estera rehefa tonga ilay fotoana handripahana ny Jiosy, satria tsy maintsy ho tratra ihany hoe Jiosy izy. Na izany aza, dia tena nino i Mordekay fa tsy maintsy hanatanteraka ny teniny i Jehovah ka tsy hamela ny vahoakany ho fongotra. (Jos. 23:14) Hoy mihitsy izy: “Iza no mahalala raha ho amin’ny toe-javatra toy izao indrindra no nisandratanao ho vadin’ny mpanjaka?” (Est. 4:12-14) Tena natoky an’i Jehovah tokoa i Mordekay. Manahaka azy ve ianao?—Ohab. 3:5, 6.
Nanam-pinoana ka vonona ho faty
24. Inona ny porofo fa nanam-pinoana sy be herim-po i Estera?
24 Nanaiky ho any amin’ny mpanjaka àry i Estera. Tena sarotra anefa ilay izy ka nasainy notenenin’i Mordekay ny Jiosy, mba hifady hanina miaraka aminy mandritra ny telo andro. Hita koa fa nanam-pinoana sy be herim-po izy satria niteny hoe: “Raha tsy maintsy ho faty aho, dia aoka ho faty.” (Est. 4:15-17) Mbola manohina ny fontsika hatramin’izao io teniny io. Azo antoka fa nivavaka mafy i Estera nandritra ilay telo andro, ary angamba mbola tsy nivavaka mafy hoatr’izany mihitsy izy. Tonga amin’izay àry ilay fotoana. Nanaovany ny akanjony tsara indrindra mba ho babo ny fon’ny mpanjaka.
Vonona ho faty mihitsy i Estera mba hiarovana ny vahoakan’Andriamanitra
25. Tantarao ny nidiran’i Estera tao an-dapa.
25 Nankany amin’ny mpanjaka i Estera, araka ny voalaza tany aloha. Azo antoka fa nitebiteby be izy ka nivavaka mafy. Niditra teo an-tokotany izy mba hahatazanany an’i Ahasoerosy. Nodinihiny angamba ny tarehiny mba hahitany hoe faly izy sa tsia. Io ilay mpanjaka fa mipetraka eo amin’ny seza fiandrianany. Voahety mahitsizoro ny volombavany ary voaolakolana tsara ny volony. Mety ho nasaina niandry aloha i Estera, ka hoatran’ny adiny zato ilay izy taminy! Hitan’ilay vadiny izy nony farany. Taitra angamba i Ahasoerosy, nefa tsy naninona ihany avy eo. Notondroiny tamin’ny tehiny volamena kosa aza i Estera!—Est. 5:1, 2.
26. Nahoana isika no mila herim-po toa an’i Estera, ary nahoana no mbola tsy vita ny adidiny?
26 Tsy nivadika tamin’Andriamanitra i Estera ka sahy niaro ny vahoakany. Modely ho antsika Kristianina izy, satria nilaza i Jesosy fa tokony ho tia sy hahafoy tena ho an’ny namantsika isika. (Vakio ny Jaona 13:34, 35.) Tsy hahavita an’izany anefa isika, raha tsy manana herim-po toa an’i Estera. Nanaiky hihaino an’i Estera izao ny mpanjaka. Eo anefa vao tena ho sarotra ny adidiny. Tsy maintsy handresy lahatra ny mpanjaka mantsy izy hoe tena ratsy fanahy i Hamana, ilay mpanolo-tsainy natokisany indrindra. Ahoana anefa no hanaovany izany ka hanavotany ny fireneny? Araho àry ny tohin’ny tantara.
^ feh. 2 Maro no mihevitra fa i Ahasoerosy ihany no Ksersesy I, mpanjaka persianina tany am-piandohan’ny taonjato fahadimy T.K.
^ feh. 9 Jereo ilay efajoro hoe “Fanontaniana Momba An’i Estera”, Toko 16.
^ feh. 18 Efa naringana tamin’ny andron’i Hezekia Mpanjaka “ny sisa” tamin’ny Amalekita, ka tena vitsy kely no tavela, anisan’izany ry Hamana.—1 Tan. 4:43.
^ feh. 19 Nanome talenta volafotsy 10 000 i Hamana. Ana hetsiny tapitrisa ariary eo ho eo izany ankehitriny. Raha i Ksersesy I ihany no Ahasoerosy, dia zarany aza nahazo vola be. Nilainy mantsy izany satria efa ela izy no nikasa hiady tamin’i Gresy. Voa mafy anefa izy tamin’ilay ady.
^ feh. 22 Nalaza ho mora niova hevitra sy nasiaka be i Ksersesy I. Izao, ohatra, no nohazavain’i Hérodote, Grika mpahay tantara, momba ilay ady tamin’i Gresy: Nanome baiko i Ksersesy hoe hasiana sambo mitambatambatra eo amin’ny Andilan-dranomasin’i Hellespont, mba hatao tetezana. Simban’ny rivo-mahery anefa ilay tetezana, ka ireo injeniera nanao an’ilay izy indray no nasainy notapahin-doha. Nasainy “nosazina” mihitsy aza ilay rano, ka sady nokapohina no nisy ozona novakina mafy. Niangavy azy koa ny lehilahy iray nanan-karena mba tsy halefa any an’ady ny zanany. Nasain’i Ksersesy nokapaina roa ilay tovolahy, ary naseho vahoaka ny fatiny mba ho fampitandremana.
Ahoana no nampisehoan’i Estera fa nanetry tena sy nankatò izy?
Ahoana no nanampian’i Mordekay an’i Estera mba tsy hatahotra hiaro ny fireneny?
Inona no nataon’i Estera, ka ahitana fa be herim-po izy?
Inona ny toetran’i Estera tianao hotahafina?
Hizara Hizara Sahy Niaro ny Vahoakan’Andriamanitra Izy